Iza no nahazo ny tompon-daka tamin'ny F1 2014? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Grand prix kanadiana 2014 - vahaolana miorina amin'ny hetsika
Grand prix kanadiana 2014 - vahaolana miorina amin'ny hetsika
Iza no nahazo ny tompon-daka tamin'ny F1 2014?
(Fanafainganana fiara) (Mozika manaitaitra mampientam-po) - Ekipa 10, mpamily 20, dolara amina miliara, nandritra ny 70 taona izao tontolo izao dia nijery ny Formula 1 hijery hoe iza no tsara indrindra amin'ny tompon-daka eran-tany. Ny mpamily, ny anarany sy ny zom-pireneny dia hidina amin'ny tantara. Ireo mpamily avy amin'ny firenena 40 dia nihazakazaka tao amin'ny Formula 1, saingy mihoatra ny antsasaky ny tompon-daka dia avy amin'ny firenena efatra fotsiny ary mety tsy izy ireo efatra voalohany tonga saina.
Iza amin'izy ireo? Tompondaka? Ary ahoana no ahitan'ny firenena iray manana mponina manana habe amin'i South Carolina manana ny rakitsoratry ny tompon-daka lehibe indrindra eo amin'ny sehatry ny motera iraisam-pirenena? Tokony hijanona ianao vao hahalala, izany no Wheelhouse. (mozika gadona upbeat) andiany iraisam-pirenena tokoa ny Formula One. Hatramin'ny nanombohan'ny taona 1950, dia nisy ekipa avy amin'ny firenena 26, hazakazaka amin'ny firenena 33 ary mpamily 767 avy amin'ny firenena 40 samy hafa.
Saingy tamin'ireo mpamily rehetra ireo dia tsy nisy afa-tsy tompon-daka eran-tany 33. Avy aiza ny tompon-daka? Avy amin'ireo firenena mpamokatra mpamily be indrindra ny tompon-daka? Eny, andao aloha hijery eo. (Drumming) Manodidina ny 65% ​​ny mpamily F1 rehetra dia avy amin'ny firenena efatra fotsiny; Italia, Etazonia, Frantsa ary Angletera.
ny fomba mampihena lanja ao anaty adiny iray
Tsy takona afenina ny antony namokaran'ireo firenena efatra mpifaninana F1 be dia be ireo. Raiso Italia. Ao an-tranon'i Ferrari, ekipa iray izay tsy mbola diso tamin'ny vanim-potoana Formula 1 ary nandrombaka ny tompondakan'ny mpanao trano 15 heny tamin'ny firaketana.
Izy io dia tranon'ny boribory F1 malaza toa an'i Monza, Imola ary Mugello. Saika mpamily F1 100 no italianina. Ka isan'ny tompon-daka italiana ve? Roa ihany.
Ary hatramin'ny 1953 dia tsy mbola nisy tompon-daka italiana iray minitra
Inona ny lalana F1 miadana indrindra?
Ity fizarana Real Engineering ity dia entin'i Skillshare, trano misy kilasy 15000 izay afaka mampianatra anao fahaiza-manao vaovao. Ireo olona 400 voalohany izay misoratra anarana mampiasa ny rohy mankany amin'ny famaritana dia hahazo fitsarana maimaimpoana mandritra ny 2 volana. Hatramin'ny nahaterahany tamin'ny 1950, niha haingana dia haingana ireo fiara tamin'ny fiadiana ny tompondakan'ny hazakazaka Formula 1.
Ny aerodynamika ambony, motera matanjaka kokoa, ary fitaovana maivana kokoa dia nanampy tamin'ny fampihenana ny ora làlana. Ny haingam-pandeha ho an'ny Grand Prix Monaco dia nisondrotra tamin'ny 104 km / ora tamin'ny 1950 ka hatramin'ny 170 tamin'ny 2007, saingy nisy zavatra hafahafa nitranga tamin'ny 2007. Tsy nihazakazaka izy ireo, ary tsy izany ihany fa mihisatra.
Ka inona no nitranga ary inona no nataon'ny FIA tamin'ny 2017 hamerenana amin'ny laoniny ny tompon-daka? Tao anatin'ny folo taona lasa dia nifindra be ny fifantohana amin'ny fiadiana ny tompondakan'i F1. Ny vidin'ny fifaninanana dia nanery ny FIA hametraka fitsipika eo amin'ny sehatry ny lalao ary hisorohana ireo ekipa misy famatsiam-bola tsaratsara kokoa hanosika ireo ekipa hafa hiala amin'ny fifaninanana. Io fiovan'ny toe-tsaina io dia miavaka amin'ny fijanonan'ny fampandrosoana ny maotera tamin'ny taona 2007 sy ny fepetra fitehirizana vola izay notohizana satria ny Honda, BMW ary Toyota dia voatery nisintona tamin'ny fiadiana ny tompon-daka noho ny krizy ara-toekarena manerantany tamin'ny 2008.
Ny lalàna vaovao dia nametraka ny fitehirizana kodiarana sy ny fahombiazan'ny solika amin'ny lohalaharana amin'ny famolavolana, izay nanery ny mpamily ihany koa ho mpandala ny nentin-drazana sy hanapaka ny fotoana fanarahan-dalàna. Na noho ireo fiovana ireo na tsia dia nanjary tsy dia malaza intsony ny Formula One ary tsy tokony hohadinointsika fa Formula One dia orinasa iray ao aminy. Orinasa tokony hampifaly ny orinasa sy ny mpankafy.
Ka ny fanovana ny lalàna amin'ity taona ity dia mifantoka amin'ny fanaovana ny fanatanjahantena haingana sy manaitaitra kokoa amin'ny fanantenana ny hampiatoana ny fihenan'ny lazan'ny Formula 1 amin'ny fomba ahoana no misy akony amin'ny fiasan'ny fiara? Ny fiovana tsikaritra indrindra raha ampitahaina amin'ny fiara Formula 1 amin'ity taona ity dia ny sakan'ny fiara amin'ny ankapobeny. Ny sakan'ny fiara tamin'ity taona ity dia nitombo hatramin'ny 1800 mm ka hatramin'ny 2000 mm. ampahany lehibe amin'ity sakanana fanampiny ity izay ampiasaina amin'ny kodiarana midadasika kokoa.
Izany dia mampitombo be ny faritry ny kodiarana amin'ny tany, izay mampitombo ny fihenan'ny kodiarana. Raha mijery ny fampitoviana fihantsiana ianao izao dia ho hitanao fa tsy miankina amin'ny faritra izany. Ny fikororohana dia aseho fotsiny ho coefficient an'ny friksi ampitomboina amin'ny lanjan'ny fiara.
Ahoana no hampitomboan'ny kodiarana iray? Ny patch mifandraika kokoa dia misy fiatraikany amin'ny hainganana ny kodiarana, izay midika fa ny kodiarana tery iray dia very haingana kokoa ny fitaovany. Mba hanoherana an'io dia tsy maintsy vita amin'ny fitaovana mafy kokoa ny kodiarana izay tsy rovitra haingana. Ny ekipa F1 dia manana fitaovana maina 5 hisafidianana mandritra ny hazakazaka, manomboka amin'ny malefaka ka hatramin'ny henjana.
Ireo fitaovana malefaka dia manana coefficient ambonimbony kokoa noho ny fikororohana fa tsy maharitra ela. Amin'ny ankapobeny, ny kodiarana midadasika dia mamela ny kodiarana malefaka miaraka amin'ny fihazonana avo kokoa haharitra kokoa. Amin'izay ny mpamily afaka mamaky taty aoriana ary manafaingana haingana kokoa.
Ireo kodiarana midadasika kokoa dia mitaky elatra eo anoloana kokoa satria tsy ny famoronana herin-tena no tena tanjony fa ny hamitahana ny rivotra miditra mba hikoriana manodidina ny kodiarana. Ny kodiarana dia afaka mamorona dragona be dia be ary koa mamorona rivotra mikorontana be dia be izay hisorohana ny velaran-drivotra aerodynamika ao aorian'ny kodiarana tsy hiasa tsara, noho izany ny elatra eo anoloana dia natao hamelana ny rivotra hikoriana manodidina ny kodiarana, izay tsara fampiasana an'ity fitantanan-drivotra ity dia ity vortex fantatra amin'ny hoe vortex Y250. Araka ny lalàna F1, ity faritra afovoan'ny elatra eo aloha ity dia tsy tokony hamorona fidinana ambany, fa mety 250 mm miala eo afovoany.
Ny vortex dia vokatry ny downforce noforonin'ny elatra aloha, FA tsy ny voka-dratsy fotsiny izay mahatonga ny vortices hisintona no namboarina tamim-pitandremana mba hitarika rivotra lavitra ireo kodiarana sy izay ilana izany. Raha te hahalala bebe kokoa dia andao jerena ny simika injeniera vitsivitsy ary hampitahantsika ny fahasamihafana misy eo amin'ny fiara 2016 sy 2017. Ireo dia mety toa mampatahotra ny maso tsy zatra, fa ireto ny zavatra tena ilaina tokony ho fantatrao.
Eto isika dia mijery ny tsindry rivotra manamorona ny fiara, izay aseho ny toerana. Ny manga sy ny maitso dia rivotra ambany tsindry, mavo sy mena ny rivotra avo lenta. Ny fiara F1 dia mila rivotra tsindry ambany eo ambanin'ny fiara sy rivotra avo lenta ao ambonin'ny fiara satria miteraka ny fidinana ambany.
Andao averintsika amin'ny tsipika ity fanahafana ity ary jereo ny fiantraikan'ireo fiovana ireo tamin'ny zava-bitan'ny fiara. Eto ianao dia afaka mahita ny vortex Y250 manomboka miforona rehefa mihodina ny rivotra avy eo an-tampon'ny elatra ka hatrany ambany. Ny olona iray dia afaka mahita mazava fa ny vortex Y250 dia lehibe kokoa amin'ity taona ity noho ny velarana lehibe kokoa ary mihalehibe rehefa midina ilay fiara rehefa misintona ny rivotra manodidina azy ny vortex ambany ary arakaraky ny fandaniany ny rivotra no kely kokoa azo ivoahan'ny rivotra ambanin'ny Fiara, izay mahatonga ny fihenan'ny rivotra.
Azonao jerena eto izany rehefa manomboka ny firafitry ny tany. Azonao atao ihany koa ny mahita ny vortex Y250 mamorona vortices tsindry ambany fanampiny amin'ity taona ity avy amin'ny bargeboard izay mitarika ny vortices ary manampy azy ireo hamorona vortices tsindry ambany ambany toa ity iray nipoitra avy tamin'io elatra kely madio io, ny bargeboard dia tamin'ity taona farany ity tsy navela ny toerana satria faritra voafetra io faritra io, izany hoe faritra tsy ahafahana mametraka rafitra. Ny ekipa toa an'i Mercedes dia manana barbeboards be pitsiny izay be pitsiny kokoa noho ireo ao amin'ity modely ity.
zava-manitra tsara ho an'ny mamontsina
Raha manohy mitondra fiara isika dia afaka mahita fa ny kinova 2017 dia maitso maitso kokoa eto ary noho izany dia tsy dia misy tsindry loatra, ity miaraka amin'ny gorodona malalaka dia mamela ny fiara 2017 hiteraka fidinana bebe kokoa. Raha niroso indray isika, dia hitantsika ny tena antony mahatonga an'io fihenan'ny tsindry io, ilay diffuser, io ampahany io ao aorian'ny fiara izay nitombo ny haavony sy ny sakany. Ny diffuser dia ny vavahady fivoahana ho an'ny rivotra ambanin'ny fiara, ary ny varavarana misokatra lehibe kokoa dia manitatra ny rivotra mivoaka eo ambanin'ny fiara hivelatra sy hanafaingana hameno ny habaka, izany dia mitombo hatrany ny fihenan'ny rivotra, satria ny fitsipiky ny Bernoulli milaza amintsika fa ny fitomboan'ny hafainganam-pandehan'ny ranoka dia mifanaraka amin'ny fihenan'ny tsindry amin'ny rivotra.
Ny diffuser dia manome fidinana lehibe miaraka amin'ny fanoherana ny rivotra kely dia kely. Tsy toy izany koa ny elatra aoriana, izay napetraka avo ambonin'ny fiara tamin'ny 2016 ary miteraka drag hafa fanampiny. Ny elatra aoriana dia nampidinina tamin'ny taona 2017, mampihena ny vokany amin'ny drag satria apetraka amin'ny rivotra izay efa voakasik'ireo rafitra ambony.
Ezaka hitazomana ny hafainganam-pandehan'ny fiara io, satria nitombo be ny dragona rehefa nihanitatra ny fiara. Mba hanoherana izany dia nomena solika 5 kilao fanampiny ireo ekipa. Amin'ny antsasaky ny vanim-potoana 2017 dia hitantsika ny fiantraikan'ireo fanovana ireo tamin'ny F1.
Tsy misy isalasalana fa manana fiara tsara tarehy indrindra F1 efa ela isika ary mamaky firaketana indray izy ireo noho ny fihenan'ny kodiarana midadasika kokoa sy ny aerodynamika ambony. Na izany aza, ny hafainganana hafaingany teo an-jorony, na izany aza, dia tsy maintsy nahafoy ny sasany tamin'ireo hetsika nahatratra azy ireo satria ireo fiara midadasika kokoa ao aorinan'izy ireo dia mamorona rivotra maloto kokoa, ka manasarotra ny fiara any aoriana ny hahazo fidinana an-tsokosoko. Nampientanentana kokoa ny F1 ve ireo fanovana ireo? Apetrako aminao ny fanapaha-kevitra.
Maro aminareo no manontany ahy hoe inona ny rindrambaiko ampiasaiko hamelomana ireo lahatsoratra ireo sy ny fomba nianarako azy. Tao amin'ny lahatsoratra androany dia nampiasa fitambarana Adobe After Effects sy SimScale aho ary nampianatra ny tenako hampiasa ny roa amin'ny fijerena lahatsoratra an-tserasera. Betsaka ny fahaiza-manao azo ampianarina an-tserasera amin'izao fotoana izao ary Skillshare dia toerana mahafinaritra hanaovana izany.
Miaraka amin'ny taranja matihanina sy azo takarina izay manaraka fihodinana mazava ianarana, Skillshare dia vondrom-piarahamonina mpamorona an-tserasera izay manana taranja 15000+ amin'ny famolavolana sary, sary mihetsika, fampiroboroboana tranonkala, mozika, sary, famolavolana lahatsoratra ary maro hafa. Mampalahelo fa mbola tsy manana fampianarana simika injeniera any izy ireo, saingy miasa aho izao amin'ny famoronana ny ahy ho an'i Skillshare. Ny mpikambana premium dia manomboka amin'ny $ 10 isam-bolana amin'ny fidirana tsy misy fetra amin'ny fampianarana rehetra, fa ireo olona 500 voalohany nisoratra anarana tamin'ny fampiasana an'ity rohy ity dia hahazo fitsarana 2 volana maimaim-poana.
Amin'izay 2 volana izay dia afaka mianatra mora foana ny fahaizana ilainao ianao mba hanombohana fialamboly na orinasa vaovao toa ny nataoko tamin'ity fantsona ity. Manontania tena avy hatrany. Inona no fahaizanao nampihemotra ny fianaranao? Inona ny tetikasa nofinofisinao hatrizay nefa tsy azonao antoka raha manana fahaiza-manao hanaovana izany ianao.
Manomboha dieny izao ary midira amin'ny Skillshare amin'ny alàlan'ny rohy etsy ambany. Tsy mila ho very sy hanana fahaiza-manao fiainana sarobidy ianao. Toy ny mahazatra, misaotra nijery sy misaotra an'ireo mpanohana Patreon ahy rehetra.
Vao nampakatra fizarana vaovao an'ny Showmasters aho, ny podcast-ko miaraka amin'i Sam avy amin'ny Wendover Productions miaraka amin'ireo vahiny manokana avy amin'ny fantsona Wisecrack. Ny rohy mankasitraka anao sy tianao amin'ny pejiko Twitter, Facebook ary Instagram dia hita eto ambany.
Inona no F1 Grand Prix tsara indrindra aleha?
fizaran-tanyavy any Monaco dia arabefizaran-tanynapetraka teny amin'ny araben'ny tanànan'i Monte Carlo sy La Condamine manodidina ny seranan'ny Principality of Monaco.
Hey ry zalahy, niverina tany DC aho tamin'ny dia nataoko ary nieritreritra aho fa raha mbola ato amin'ity hotely mihaja ity eo amin'ny fandriana mijery maoderina aho, dia miresaka zavatra tsy mbola nolazaiko momba ny 21-24 Oktobra, Austin Texas mba hifaninana amin'ny US Grand Prix raha ny marina, rehefa nikaroka sy niomana tamin'ny Grand Prix Formula 1 aho dia tsy nahita atiny betsaka hilaza aminao hoe inona ny traikefa ary inona ny zavatra tokony hotandremana, ary Te hizara ny zavatra niainako aho ary mieritreritra aho fa azo ampiharina amin'ny Grand Prix maro eran'izao tontolo izao satria ny Formula 1 dia mitantana azy ireo amin'ny fomba mitovy. Andao tonga dia manondro ny laharana voalohany, tianao ho azo antoka fa mahazo ny tena tapakila Formula 1 ianao alohan'ny hanelingelenana zavatra hafa, hino izany na tsia? amidy haingana dia haingana. Ny torohevitro ho an'izay rehetra tsy dia za-draharaha ao amin'ny Formula 1, dia aza ketraka amin'ny tapakila, traikefa tsy manam-paharoa io ary hiteny aho fa raha sambany eto ianao dia maniry ny hahazo tsiro fotsiny Amin'izany, ny fahazoana miditra amin'ny ankapobeny dia mamela anao handeha manodidina ny faritra tsy misy toerana voatendry ary hankafy ny toe-tsaina sy ny traikefa amin'ny fety izay ny Formula 1 Grand Prix dia toy ireo izay manana traikefa bebe kokoa amin'ny Formula 1 ary mihevera ny tenanao mpankafy marina, nilaza aho fa te-hahazo antoka fa mahazo seza mahafinaritra ianao.
Ny ampahany tsara indrindra amin'ny zavatra niainana raha ny momba ny tapakilanay dia ny hoe nipetraka teo amin'ny tsipika fiandohana / nahavita teo amin'ny zoro lehibe izahay ary tena nijoro nanoloana ny lampihazo ka tsy nila nihazakazaka teny amin'ny làlana izahay rehefa nijoro teo amboniny izy ireo Vonona ny hanome voninahitra ny mpandresy Grand Prix Raha tena liana amin'ny fanatanjahantena ianao ary vonona ny hampiasa vola mihoatra ny $ 300 isaky ny tapakila, manaova fikarohana ataoko izay hampifandraisina amin'ireo tranonkala mahasoa voatanisa etsy ambany, fa ny lehibe indrindra tanjon'ny fikarohana nataonao dia ny hahitanao ny toerana nanendrena ny sezanao. Ka zahao ny drafitry ny seza ho an'io làlana manokana io ary alao antoka fa mety hijery lahatsoratra sasany aza ianao hahitanao hoe hanao ahoana ny fijery amin'ny ora manaraka, ny laharana 2 amin'ny lisitrao dia tokony ho amin'ny daty mifanindry kely amin'ny resaka teo aloha momba ny fividianana ny tapakila rehefa hitanao ny daty, satria isaky ny faran'ny herinandro 1 dia misy telo andro, misy andro fiofanana maimaimpoana, misy ny andro fanamarinana ary misy ny andro hazakazaka iray tena izy ny andro firazanana hatrany Ny alahady dia afaka misafidy mandritra ny telo andro isika ary mividy ny tapakila mandritra ny telo andro amin'ny hazakazaka satria be dia be ny zavatra tokony hatao matetika ny lalam-pihazakazahana indraindray dia manana kaonseritra maimaimpoana toa any Austin izy ireo, JustinTimberlake dia nanana inona no nampidirina ao raha misy ny tapakila ampidirina amin'ny hazakazaka iray mankany amin'ny iray hafa dia miovaova ny karazana hetsika tianao hojerena indray mandeha indray fa any Austin dia tena milay tokoa fa satria nanan-janaka izahay dia tsy voatery nandeha isaky ny mandeha Andro ee, alao sary an-tsaina ny fandraketanao ny zava-dehibe izao, eny, raha vao sambany ianao maka andro iray satria tonga amin'ny andro firazanana izy ireo ary ny dianao dia tokony haharitra andro firy no tianao holaniana alohan'ny tena hazakazaka avy aminao izay tena izy ireo mpitia fanatanjahan-tena, hoy aho, miambena hatrany ary tonga amin'ny andro fanazarana maimaim-poana, inona ny zoma, na ny fanatanterahana ny asabotsy, ny fotoam-pivoriana ho an'ny autografia raha toa ka apetrak'izy ireo ao amin'ny grand prix heveriko fa mendrika izany raha liana ianao amin'ny fanatanjahantena ary mieritreritra ianao fa te handray soa avy amin'izany dia handray anjara amin'ny zoma asabotsy ary mankafy ny hazakazaka amin'ny alahady dia hiresaka momba izay tokony hoeritreretinao rehefa nametraka fanendrena ianao izao dia manana ny fanendrena raha toa ianao ka mpankafy iza no ve Raha te-hijery ny hetsika voalohany ianao, na raha tena mpankafy fanatanjahan-tena ianao ary eo isan'andro, farafaharatsiny mba fantatrao izay sidina manaraka satria fantatrao ny andro ary atokisanao ahy fa ny mpandraharaha hotely eto an-toerana rehetra s fantatrao hoe inona ireo andro ireo Daty, noho izany dia tena tianao ho azo antoka fa mieritreritra momba ny toeram-ponenana sy ny sidina mialoha ianao rehefa hisafidy hotely na sidina. Heveriko fa tsy dia misy mahasamihafa azy ny fanatisme fanatanjahan-tena na ny faniriana hiditra na hijerena ny hetsika voalohany fotsiny, te ho azo antoka ny drafitra mialoha mialoha anao, sarotra be amiko ny manome anao misy toro-hevitra noho izany dia miankina amin'ny daty fidinao ary rehefa voafidy ireo daty ary fantatrao fa hiala ianao dia nividy ny tapakila ianao, manaova famandrihana mamatotra fotsiny ary mahazoa ny sidina ary alao antoka fa ianao mikarakara hotely hikarakarana.
Miaraka amin'ny Airbnb eny ambony rivotra, aza matahotra ny hamandrika trano fandraisam-bahiny somary lavitra ny tanàna satria amin'ny faran'ny andro toy ny nitranga tany Austin Texas ny lalana dia 25 minitra ivelan'ny tanàna ary mifidy hotely izahay izany hoe eo amin'ny 35 minitra any ivelany any? ny tanàna tena akaiky kokoa ny làlam-pitrandrahana isika noho ny afovoan-tanàna ary nilalao ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny miampy ny zavatra nataonay vao nanofa ny fiara izahay raha tsy hoe faritra misy ny tanàna toa an'i Singapore Monaco Baku no hanoro hevitra anao tena hanofa fiara? satria mazàna ireo racetracks ireo dia any ivelan'ny tanàna ka mila mandeha any ianao ary matokia ahy azafady azafady azafady fa tsy te hisavoritaka amin'ny fitateram-bahoaka ianao satria mety tsy ho be loatra izany, noho izany ny fanofana ny fiara dia mamela anao manofa fiara ianao misafidy hotely somary lavitra, angamba somary manakaiky kokoa ny lalana lavitra any ivelan'ny tanàna, nefa miaraka amin'izay dia hanamora ny fiainanao an'arivony izany ka tsy dia misy tsy itovizany. Tsy mila manao an'io na amin'ity manaraka ity, raha ny marina, fanamarihana fohy momba an'i Austin ny tenany raha mankany Etazonia ianao. Grand Prix Ianao koa mitondra fiara mankany amin'ny toeram-piantsonan'i Austinbuy raha sendra nijanona tao afovoan-tanàna ianao. Nisy safidy nitaingina fiarandalamby fa ny sidina dia maharitra 20-25 minitra raha tsy misy ny fifamoivoizana ary amin'ny andro firazanana, minoa ahy, be dia be ny fifamoivoizana mety maharitra adiny iray sy sasany vao miala tanàna mankeny amin'ny racetrack manaikitra fotsiny ny bala satria efa mandany vola be amin'ny zavatra hafa rehetra ianao ary mandoa fotsiny ny fijanonana dia aza miandry any Austin ny tapakila dia tokony ho zato dolara ho an'ny toeram-piantsonana, fa toerana fijanonana ho an'ny fiara.
Ka rehefa misy namana efatra ary ny tsirairay aminareo dia mandany $ 25 manarona ny toeram-piantsonana ary manamora ny fiainanareo satria voafehy ianareo izao rehefa miverina rehefa mivoaka dia diniho fotsiny ny fotoana fivezivezena. lava dia mahasosotra izany ary antenaiko fa ho azonao antoka fa tsy tara ianao, eny ary mieritreritra aho fa ny torohevitro farany dia tena azonao antoka fa mieritreritra hetsika iray ianao ary tsy tokony handeha ho any amin'ilay hazakazaka fotsiny ianao satria minoa ahy adala ary marina ny hiditra satria samy miezaka ny hiditra amin'ny andro voalohany amin'ny faran'ny herinandro hazakazaka ny zoma na hivoaka avy hatrany aorian'ny hazakazaka izay zavatra ataon'ny alatsinainy maraina raha toa ka mahavita zavatra any an-tanàna hatao ianao, Tahaka ny tranga nisy anay, tena nanana fotoam-pianakaviana izahay tao amin'ny hôtely satria nijanona fanampiny izahay, heveriko fa antsasak'adiny, ary nahagaga fa izany no andrana voalohany? . Izy kosa dia nandositra ahy izany zavatra izany, miverena eto, manana milina fivarotana pecan 24/7 tokoa izy ireo tamin'ny taonjato faha-21.
Heveriko fa ireo no hevi-dehibe tiako hitondrana anao, tsy misy zava-dehibe na adala heveriko fa tena lojika izany, saingy hitako fa sarotra ny nandeha teo anelanelan'ny loharano samihafa mba hahafantarana izay hitranga mandritra ny hetsika. Manantena aho fa hanampy anao bebe kokoa ity lahatsoratra ity, azafady ianao manontany ahy bebe kokoa amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany mahita ahy ao amin'ny Twitter na Instagram mahafinaritra anao manao fialan-tsasatra ianao fa tsy tonga amin'ny hazakazaka fotsiny fa hiaina ny traikefa. inona no tokony holazaiko fa fomba tena tsara nandaniako iny takariva nanirery iny tamin'ny dia nataoko izao rangahy Tohir hiala sasatra aho efa herinandro lasa izay no andrasako manomboka ny fanovana ary manantena ny hevitrao sy ny hevitrao momba izany faritra heno etsy ambany Hey misy fizarana fanehoan-kevitra ary any amin'ny toerana hafa misy bokotra fisoratana anarana dia aza hadinoina izany fa misaotra hatrany ny sainao. Salama indray, io tokoa ny maraina taorian'ny nifohazako tamin'ity maraina ity ary tsapako ny antony tena nikasako ny hitifitra ilay lahatsoratra nataoko teto tany DC nandritra ny faran'ny herinandro F1 tany Austin, fa ho an'ny sasany kosa dia nijanona fotsiny aho ary somary kivy. ity hevitra momba ny lahatsoratra ity ary hitako fa efa fantatrao izay mety ho ampitso amin'ny ho avy hampiasaiko amin'ny zavatra hafa, miverena amin'ny omaly ary tafangona ny lohako ary mipetraka tokoa aho ary manao ilay lahatsoratra dia nahatonga ahy hahatsapa ho tsara satria mahatsapa fa tsara Andriamanitra tena mahavita zavatra, misaotra, mahita manaraka
Firy ny firazanana amin'ny 2014?
Andininy momba ny prix 19 grands rehetra ao amin'ny2014Kalandrie Formula 1
Ahoana no hamaritanao ny hazakazaka? Raha tsy maintsy nofaritanao ny antony inoanao fa firazanana iray ianao ary olon-kafa dia mety hifantoka amin'ny any ivelany ianao - ny hoditrao, ny volonao, angamba na ny firafitry ny vatanao sy ny tavanao aza. Saingy matetika, ireo masontsivana ara-batana ireo dia midika zavatra samy hafa arakaraka ny kolontsaina misy anao. Ohatra iray miharihary ny lokon'ny hoditra.
Mampiasa ny teny hoe fotsy sy mainty izahay hilazana hazakazaka roa, fa ny fahasamihafana amin'ny lokon'ny hoditra eo amin'ireo hazakazaka ireo dia tsy mazava loatra. Ny lehilahy fotsy iray izay nandany ny fahavaratra teny amoron-dranomasina dia mety ho nody tanin'alika, fa ny tan kosa tsy manova ny firazanany. Ary ny mainty hoditra maivana dia mety hanana hoditra izay tsy mainty loatra noho io volon-koditra io.
Mazava fa ny hazakazaka dia mihoatra ny loko ara-bakiteny amin'ny hoditry ny olona iray fotsiny. Ka ndao hiresaka momba ny firazanana sy ny antony maha-lohahevitra iray manohina bebe kokoa noho ny hoditra lalina fotsiny. Toy ny miralenta, ny hazakazaka dia sokajy voaorina ara-tsosialy.
Amin'ity tranga ity dia ampiasaina hanasokajiana ireo olona mizara toetra biolojika izay heverin'ny fiaraha-monina iray ho zava-dehibe. Mety manontany tena ianao hoe, ahoana no ahafahan'ny hazakazaka sady fananganana fiaraha-monina no zavatra mifototra amin'ny biolojia? Eny, ny ampahany lehibe amin'io famaritana ny firazanana io dia ny ampahany farany: Izay heverin'ny fiaraha-monina fa zava-dehibe. Azo antoka fa ny lokon'ny hoditra dia miovaova be amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao, fa ny lokon'ny maso ihany koa, ary tsy mihevitra ny olona manana maso manga ho karazana hafa noho ny olona manana maso volontsôkôlà.
ny lakroa mahasalama
Ary na dia toetra amam-batana aza matetika no ampiasaina hilazana na hamantarana hazakazaka, dia tsy ampiharina hatrany hatrany. Raiso, ohatra, ilay fantatra amin'ny hoe 'rotsak'orana tokana' any Etazonia, izay na dia ny faran'izay kely indrindra amin'ny razambe afrikanina amerikana aza dia ampy hanasokajiana olona mainty fa tsy fotsy. Na izany aza, tsy ny mifanohitra amin'izay no izy - ny olona manana ray aman-dreny mainty sy fotsy hoditra dia saika heverina ho fotsy.
Ary koa, ny olona avy amin'ny toerana samy hafa na ny vanim-potoana samihafa dia samy manana ny fanazavany ireo vondrona ara-pirazanana. Ankehitriny, ny eropeana fotsy hoditra dia matetika no raisina ho 'fotsy' any Etazonia. Tsy maninona na anglisy ianao na Irlandy na Italiana na Poloney na Alemanina - 'fotsy' tsotra fotsiny ianao.
Saingy tsy izany no nitranga taonjato iray lasa izay. Tany am-piandohan'ny taonjato faha-20, izay rehetra tsy protestanta fotsy hoditra anglisy dia noheverina ho 'foko' - ka raha italianina na irlandey ianao ohatra dia tsy raisina ho fotsy. Toy izany koa, ny fivavahana jiosy dia matetika no heverina ho foko ankehitriny any Etazonia.
Saingy ny eropeanina dia mieritreritra kokoa fa ny maha jiosy dia hazakazaka. Mampametra-panontaniana izany: inona no mahasamihafa ny foko sy ny foko? Eny, ny foko dia sokajy voaorina ara-tsosialy mifototra amin'ny toetra ara-kolontsaina heverin'ny fiarahamonina ho zava-dehibe fa tsy toetra biolojika. Amin'ny ankapobeny, ny foko iray dia vondrona iray izay mizara lova ara-kolontsaina iraisana.
Ny fiteny, ny fomban-drazana, ny fivavahana - ireo rehetra ireo dia karazana kolontsaina afaka mamaritra ny fiavianao. Olona roa samy hafa firazanana dia afaka manana foko - ary ny mifamadika amin'izany dia olona roa manana firazanana mitovy foko samy hafa tanteraka. Japoney sy vietnamiana dia samy heverina ho aziatika avokoa, saingy samy hafa fiaviana ara-kolotsaina.
Raha ny tena izy, ny teny izay heverin'ny olona maro fa foko - 'Hispanika' - dia miresaka foko. Mba hitrandrahana lalindalina kokoa, andao hiditra ao anaty lavaka fisainana hahitantsika ny fahasamihafana misy eo amin'ny teny Hispanika, Latino ary Amerika Latina miteny. Ny teny hoe 'Hispanika' dia niseho ho sokajy fanavakavaham-bolonkoditra tao amin'ny fanisam-bahoaka amerikana tamin'ny taona 1970, ho fomba iray hilazana ireo manana lova avy amin'ny firenena miteny espaniola.
Talohan'izay, ny fanisam-bahoaka dia nanondro ireto olona ireto ho Espaniola-Amerikanina - na dia ny fandavana ny razambeny niverina tany Espana aza dia midika hoe miverina any amin'ny ankamaroany, ny hafa kosa dia tsy marina tanteraka. Fa amin'ny resaka andavanandro, ny ankamaroan'ny olona manana fiaviana miteny espaniola dia matetika no nantsoin'ny firenena niaviany, toa ny Meksikana-amerikana na kioban, na indraindray amin'ny ankapobeny dia hoe 'amerikanina latina'. Amin'ity fe-potoana farany ity dia ahitantsika ny teny 'Latino' - sy ny Latinx tsy mitanila.
Izy io dia kinova fohy kokoa amin'ny teny Espaniola 'latinoamericano' ary manondro olona iray izay ny lovany dia avy amin'ny firenena any Amerika atsimon'i Etazonia, ao anatin'izany i Mexico, Amerika atsimo rehetra, ary Karaiba. Eny, tsy ny Hispanika rehetra dia Latino. Ohatra, raha avy any Espana ianao dia Hispanika ianao fa tsy Latino - ary tsy ny Latino rehetra dia Espaniola miteny portogey, midika izany fa tsy heverina ho Hispanika izy ireo.
Fa na inona na inona fehezanteny ampiasainao, Hispanika na Latino, tsy misy amin'ireny fanavahana ireny mifototra amin'ny endrika ivelany. Tsy toy ny firazanana, izay miorina amin'ny toetra hita maso, ny foko dia t. Ary raha ny marina dia olona roa mitovy foko no mety ho foko samy hafa tanteraka.
Ohatra, samy Cameron Diaz sy Rosario Dawson dia amerikana kiobanina, izay midika fa samy Hispanika avokoa, fa fotsy i Cameron Diaz ary mainty i Rosario Dawson. Misaotra Fa ht Bubble! Na dia ampiasain'ny fiarahamonina matetika aza ny firazanana mba hilazana ireo olona mandrindra sy mizara fahefana, samy manana ny maha izy azy ny foko sy ny foko ary amin'ny fotoana mety ananany. Ny firazanan'ny olona iray dia misy fiantraikany amin'ny valim-pifandraisana isan-karazany, manomboka amin'ny fianarany ka hatramin'ny fidiram-bolany mankany amin'ny zavatra niainany tamin'ny rafi-pitsarana heloka bevava.
Fa ny firazanana na foko iza no tian'ny olona na sahirana dia miankina amin'ny fotoana sy ny toerana itenenanay. Any UK, ohatra, nisy korontana be momba ny fifindra-monina avy any Eropa Atsinanana, indrindra ny avy any Polonina. Ny tranga fankahalana sy herisetra atao amin'ireo mpifindra monina Poloney dia nitombo hatramin'ny nandaozan'i Britain ny Vondron Eropeana.
Saingy na dia heverina ho foko vitsy an'isa any Eropa aza ny eropeana atsinanana, ny olona any Etazonia dia mety hihevitra ny mpifindra monina eropeana atsinanana ho fotsy ihany - tsy heverina ho vitsy an'isa izy ireo. Ary izany dia satria izay mamorona olom-bitsy dia mety ho sarotra kokoa noho ny eritreretinao. Ny sosiology dia mamaritra ny vitsy an'isa amin'ny sokajin'olona izay miavaka amin'ny fahasamihafana ara-batana na ara-kolontsaina izay manasaraka sy mampanaiky ny fiaraha-monina.
Jereo izao fa misy lafiny roa lehibe amin'ity famaritana ity: Voalohany, ny vitsy an'isa dia mizara toetra miavaka mifototra amin'ny toetra ara-batana na ara-kolontsaina. Faharoa, ny vitsy an'isa dia manana toerana ambany kokoa eo amin'ny fiaraha-monina ary tsy dia mahazo miditra firy amin'ny herin'ny sosialy. Mariho fa io famaritana io dia tsy milaza na inona na inona momba ny haben'ny vondrona.
Amin'ny sosiolojia, a Ny haben'ny haingan'ny vondrona vitsy an'isa dia tsy zava-dehibe. Ohatra, ny vehivavy dia heverina ho vitsy an'isa na dia manodidina ny 51% -n'i Etazonia aza izy ireo. Ary ny vondrona izay vitsy an'isa amin'ny resaka habe dia mbola mety ho maro an'isa amin'ny resaka fahefana; Ohatra amin'izany ny apartheid any Afrika atsimo.
Nanomboka tamin'ny 1948 ka hatramin'ny 1994 dia vitsy an'isa fotsy hoditra no nitana rafitra fanavakavahana ara-pirazanana sy fanavakavahana ireo mainty hoditra Afrikana Tatsimo. Amin'izao fotoana izao, ny fotsy tsy Hispanika no vondrona maro an'isa any Etazonia raha ny habeany no jerena, mandrafitra ny 61% amin'ny mponina amerikana. Fa miova haingana izany.
Hatramin'ny 2015, betsaka kokoa ny zaza teraka miloko noho ny zazakely fotsy tsy Hispanika. Ary fanjakana dimy no efa fanjakana vitsy an'isa: California, Texas, New Mexico, Nevada ary Hawaii. Ahoana no ahafahan'ny fanjakana na firenena iray an'isa vitsy an'isa? Tsy fandavana ny tenany ve izany? Amin'ny lafiny iray, na dia tsy mihoatra ny antsasaky ny firenena aza ny Amerikanina fotsy tsy Hispanika dia mety hijanona ho vondrona lehibe kokoa noho ny hazakazaka tokana hafa izy ireo.
Fa koa, mba ho vitsy an'isa amin'ny hevitry ny sosiolojika ny teny, ny vondrona dia tokony ho eo amin'ny toerana sahirana. Ary, araka ny efa noresahintsika imbetsaka, ny Amerikanina fotsy tsy Hispanika dia mirary hanana fidiram-bola ambonimbony kokoa, miaina amin'ny toerana tsara toerana kokoa, ary mety hanana asa ambony sy fanabeazana tsara kokoa noho ny foko sy foko vitsy an'isa. Alohan'ny ahafahantsika manao fampitahana amin'ireo foko isan-karazany any Etazonia, dia tokony hiresaka momba ireo firazanana mahaforona an'i Etazonia isika.
Ny sokajy U. S. Census dia mampiasa sokajy hazakazaka enina samihafa rehefa manangona angon-drakitra momba ny demografika ao amin'ny firenena.
White dia manondro izay mitory ny razana avy any Eropa, Moyen Orient, na Afrika Avaratra. Ka ny Irlanda, Alemanina, Italiana, Libaney, Iraniana, Maraokana - foko daholo izy ireo no mahalala izany. Eny, tsara ny nahenoanao.
Ireo olona manana razambe atsinanana afovoany dia sokajiana ho fotsy amin'ny fanisam-bahoaka, na dia matetika aza dia tsy raisina toy ny fotsy izy ireo. Fa maninona Eny, ilay fantatra amin'ny anarana hoe 'fotsy' dia avy amin'ny teny iray ampiasaina hanondroana ireo olona manana razambe Indo-Eoropeana: ny hazakazaka 'Kaokazy'. Ny teny hoe Kaokazy dia nanomboka tamin'ny firesahana ireo Kaokazy Mountains izay namakivaky ireo firenena ankehitriny toa an'i Russia, Georgia, Armenia, ary Azerbaijan.
Tamin'izany fotoana izany, rehefa takatra ny firazanana ho tranga biolojika iray fotsiny, ny olona rehetra avy any Eropa ka hatrany India dia natsipy ho any amin'ny vondrona 'Kaukasia' toy ny 'fotsy' ankehitriny, fa koa ireo vondrona babo izay antsoina ankehitriny hoe Aziatika, toy ny Indiana na Pakistanis. Ankehitriny, amerikana Hispanika maro ihany koa no isaina ho fotsy amin'ny fanisam-bahoaka. 'Hispanic' dia raisina ho foko, fa tsy foko, ho an'ny fanisam-bahoaka, ka tamin'ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2010, 52% ny Amerikanina Hispanika no nanondro ny tenany ho fotsy, raha 36.7% kosa no nanondro ny tenany ho 'firazanana hafa' ary ny isan-jato kely dia nanondro ny tenany ho iray amin'ireo ireo vondrona foko hafa fantatra.
Ny mainty hoditra na amerikanina afrikana no antokom-poko faharoa lehibe indrindra any Etazonia ary voafaritra ho toy ny lova afrikanina, ao anatin'izany ireo izay Afro-Karaiba. Satria ny razamben'ny Afrikana amerikana maro dia nentina tany Etazonia ho andevo, dia matetika ireo firenena niavian'ny razambeny dia tsy fantatra. Hatramin'izao, ny sisan'ny fanandevozana sy ny rafitra fambolena atsimo dia azo jerena amin'ny fitsinjarana ara-jeografika ny mainty amerikana manerana ny firenena.
Na dia Amerikanina mainty hoditra maro aza no nifindra tany amin'ny tanànan'ny avaratra nandritra ny fifindra-monina lehibe tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, ny ankamaroany dia nijanona tany atsimo, izay nanjary fantatra amin'ny anarana hoe Black Belt an'ny Etazonia. Ny sokajy fanavakavahana fahatelo ampiasaina amin'ny fanisam-bahoaka dia 'Indiana Amerikanina na tera-tany Amerikanina', izay manondro izay olona niaviany na tompon-tany na Etazonia akaiky azy sy Alaska. Na dia an-tapitrisany aza ny tera-tany amerikanina rehefa tonga ny taonjato faha-15 ny eropeana, dia 2% -n'ny velaran-tanin'ny firenena fotsiny izao no fehezin'izy ireo, 0,2% monja amin'ny mponina amerikanina, ary mijanona ho sahirana mafy amin'ny fidirana amin'ny fanabeazana sy fidiram-bola.
Ny sokajy fanisam-bahoaka fahefatra, Aziatika, dia milaza ny fiaviany any Azia Atsinanana, Azia atsimo atsinanana, na zanaky ny indianina, ao anatin'izany i Sina, India, Japan, Pakistan, Philippines, ary Vietnam. Ny vondron'olona amerikana aziatika lehibe indrindra dia ireo razambe sinoa, izay latsaka kely noho ny ¼ amin'ny isan'ny mponina amerikana amerikana. Ny sokajy fahadimy amin'ny fanisam-bahoaka dia Native Native and Other Pacific Islander, izay manondro ireo olona izay avy any Hawaii, Guam, Samoa, na nosy Pasifika hafa.
Araka ny efa noresahiko teo aloha, i Hawaii dia iray amin'ireo fanjakana misy hazakazaka vitsy an'isa no hazakazaka maro an'isa ho an'ny fanjakana - ary raha ny marina dia io ihany no fanjakana izay vitsy an'isa hatrizay. Ny sokajy farany amin'ny fanisam-bahoaka dia fehezanteny iraisan'ny 'Foko Hafa Hafa'. Mety tadidinao fa manodidina ny ampahatelon'ny Amerikanina Hispanika no tafiditra ao amin'ity vondrona ity; raha mitanisa lisitra firenena niaviany izay tsy mifanaraka Tsy misy amin'ireo sokajy hafa ny olona iray dia tafiditra ao amin'ity vondrona ity izy ireo.
Mety hieritreritra ianao fa tsy toa ireo vondrona foko izay eritreretinao matetika ireo sokajy ireo. Ary tsara izany! Amin'ny mety rehetra, ny fomba famaritan'ny governemanta ny firazanana dia hanohy hiova, hampiditra ny fiheveran'ny fiarahamonintsika ny foko sy ny foko. Ary amin'ny zavatra rehetra noresahintsika androany, dia tokony hazava fa ny hazakazaka dia tsy raikitra, sokajy tsy azo ovaina - faritan'ny fiaraha-monina Ethnics.
Niresaka momba ny fanovana ny famaritana ny firazanana sy ny foko arakaraka ny fandehan'ny fotoana sy ny toerana samy hafa izahay koa dia niresaka ny teny hoe vitsy an'isa sy vitsy an'isa. Ary farany niresaka momba ny famaritana ny firazanana any Etazonia izahay. Crash Course Sociology dia horonantsary horonantsary ao amin'ny Dr.
Cheryl C. Kinney Studio ao Missoula, MT ary natao niaraka tamin'ny fanampian'ireny olona mahafinaritra rehetra ireny izany. Ny ekipan'ny sarimiaina dia Thought Cafe ary Crash Course dia vita amin'ny Adobe Creative Cloud.
Raha te hanome maimaim-poana ny fampianarana Crash rehetra ho an'ny rehetra ianao dia azonao atao ny manohana ny andiany ao amin'ny Patreon, sehatra fitadiavam-bola izay ahafahanao manohana ny atiny tianao. Misaotra betsaka an'ireo mpiaro antsika rehetra nanatanteraka ny làlana Crash Course tamin'ny fitohizany.
Iza no nitondra an'i Ferrari tamin'ny 2014?
Mbola nandany ny fotoanany ihany koa i Fernando Alonso nitarihana ny fenitra ambanyFerrariampiakaroy ilay takelaka, saingy tsy nahavita afa-tsy podium roa vita2014. Voaporofo fa ampy hanerena azy hivoaka an'i Maranello amin'ny vanim-potoana manaraka.
Monaco ve no lalana ratsy indrindra?
Ary tsy mahagaga raha mahitaMonacono farany ambany amin'ny filaharana. Ny sefofizaran-tanymanana salanisa 12 mihoatra ny hazakazaka isaky ny hazakazaka, raha 32 amin'ny Spa, 34 ho an'ny Interlagos ary 52 ho an'ny Shanghai.
Inona avy ireo làlan'ny mpamily F1?
Raha miresaka isikaF1avy eo ny ankamaroanympamilymisafidy Spa, Suzuka ary Silverstone ho telo voalohany. Torkia dia atoerana tena, indrindra ny fihodinana 8 tena lava, fa tsy eo amin'ny kalandrie intsony.
Inona ny Grand Prix mora indrindra atrehana?
nylevitrahazakazaka ho an'ny mponina ao an-toeranaManatrikadia any Japon, Aotrisy ary Kanada, izay misy tapakila Fidirana ankapobeny 3 andro latsaky ny 3% amin'ny karama isam-bolana.1 2019.
Grand Prix iza no sarotra indrindra?
Raha atotaly, ny ain'ireo mpamily 52 sy mpijery 35 no very dia voasoratra teo amin'ny rindrin'i Monza, izay isan'ny be indrindra amin'izao fotoana izaoF1lalana. Trano misy ny belza an'ny Formula 1Loka lehibeny Circuit de Spa-Francorchamps dia heverin'ny maro ho iray amin'ireo hazakazaka sarotra indrindra amin'ny tantara.
Iza no nahazo F1 tamin'ny 2013?
Sebastian vettelniaro soa aman-tsara ny Tompondaka Eran-tany Tompondaka, nahazo ny anaram-boninahitra fahefatra nisesy tamin'ny hazakazaka fahefatra ka hatramin'ny farany 2013.